Aircon - Panasonic
1. Aircon ကဆေးထားတာမကြာသေးဘူး၊ အအေးပေါ့နေတယ်
Gas နည်းနေတာ Gas လျော့သွားလို့ပါ၊ Servicing လုပ်ပြီးပိုက်လိုင်းကို သေချာမရှင်းထားလိုက်မိဘူးဆိုရင် Gas နဲ့ လေနဲ့ရောပြီး compressor ရဲ့ Performance ကိုထိခိုက်စေပါတယ်၊ ထိုအခါ compressor က Over Heat ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် Cooling Performance ကိုထိခိုက်စေပါတယ်၊
2. Air con ကဖွင့်ပြီးမကြာဘူး၊ Timer ၀င်ပြီးရပ်သွားတယ်၊ ဘာဖြစ်တာလဲ
Aircon ဖွင့်ပြီးမကြာ Timer ၀င်ပြီးရပ်ရခြင်းမှာ Aircon servicing လုပ်ရန်လိုအပ်နေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Indoor Unit နှင့် Outdoor Unit အကြား connection များ မှားယွင်းပြတ်တောက်နေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Gas မရှိရင်သော်လည်းကောင်း၊ Aircon Power Connection Natural (N) မသန့်ရင်သော်လည်းကောင်း၊ Indoor Unit PCB မကောင်းရင်သော်လည်းကောင်း၊ စသည့်အခြေအနေများဖြစ်လျှင် အချက်ပြမီး Timer ၀င်တတ်ပါသည်
3. Aircon ရေကျတာဘာကြောင့်လဲ
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အခန်းတွင်းရှိရေများ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီး ရေခံဗန်းကတဆင့် ရေစွန့်ပိုက်ထဲသို့ ရေ၀င်သွားပါသည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ရေများ fancoil မှ ထွက်ကျလာခြင်းသည် ရေစီးဆင်းမှုမှာ အတားအဆီးတခုခုဖြစ်နေလို့ပါ၊ Servicing လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရေစီးဆင်းမှုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်
4. Aircon မောင်းထားတာ အချိန်အတိုင်းအတာတခုရှိနေပြီ Aircon ကအေးမလာဘူး
ထိုဖြစ်စဥ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေအချို့မှာ - Fan Coil မှာ ဂျီးများပိတ်နေပြီး လေအေးထုတ်လွှတ်နိင်မှုနည်းနေခြင်း၊ Condensor မှာ ဂျီးများပိတ်၍ အေးမြမှုပေးနိုင်မယ့် gas ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှု အားနည်းနေခြင်း၊ Air con စနစ်အတွင်းရှိ gas ပမာဏလုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ Aircon စနစ်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ဘဲ လည်လိုက်ရပ်လိုက်ဖြစ်နေခြင်း၊ Setting temperature ချိန်ညှိထားမှု မှားနေခြင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် Service Center ကိုဆက်သွယ်ပြုပြင်သင့်ပါတယ်
5. Aircon ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်လဲ
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ Electric Power Supply မရောက်လို့ပါ၊ Socket ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်၊ လျှပ်စစ်မီး၀င်နေပြီး Safe Guard မကောင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ Power supply ၀င်တယ်၊ Safeguard လဲကောင်းတယ်ဆိုရင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် Service Center ကိုဆက်သွယ်ပြုပြင်သင့်ပါတယ်
6. Timer ၀င်တာဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ
Aircon ဖွင့်ပြီး ခနခန Timer ၀င်တာက Non Inventor တွေမှာဆိုရင် Indoor Unit PCB ပျက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဖွင့်ပြီး နာရီ၀က်၊ တစ်နာရီအတွင်းမှာ Timer မီးလင်းရင် Gas Pressure နည်းတာမျိုး၊ Gas ပိုက်လိုင်းအတွင်း ရေခိုးရေငွေ့ သို့မဟုတ် လေခိုနေခြင်း၊ Temperature Coil Sensor ပျက်နေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ Inverter Model များတွင်တော့ Timer မီးလင်းနေပြီဆိုရင် Technician များမှ Error Code No ကိုရှာဖွေပြီး ချို့ယွင်းနေသောအစိတ်အပိုင်းကို တိကျစွာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်
7. Aircon အလုပ်လုပ်တယ်၊ လေအေးမထွက်ဘူး
Aircon စနစ်တစ်ခုမှာ အခြေခံအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်း 2ခု ပါ၀င်ပါတယ်၊ အခန်းအတွင်းရှိ fancoil နဲ့ အခန်းပြင်ပရှိ condensor တို့ဖြစ်ပါတယ်၊ Fancoil ဟာ condensor ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အေးမြမှုကို အခန်းတွင်းသို့ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ fancoil မှ လေအေးတွေမထွက်လာဘူးဆိုရင် condensor အလုပ်မလုပ်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
8. Aircon ကိုပုံမှန် Servicing လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာလဲ
Aircon ကိုပုံမှန် Servicing လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Aircon ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အေးမြမှုကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်၊ မီးအားစားလည်းသက်သာစေပါတယ်၊ Aircon ရေကျခြင်း ပြဿနာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ Aircon အကြီးစားပြုပြင်မှု လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်၊ Aircon ကိုကာလကြာရှည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါမယ်
9. Aircon Servicing ဘယ်လောက်ကြာတစ်ခါလုပ်သင့်လဲ
ယေဘုယျအားဖြင့် အိမ်သုံးတွေအတွက်ဆိုရင် 3လ တစ်ကြိမ် Servicing လုပ်သင့်ပါတယ်၊ ရုံးသုံးအတွက်ဆိုလျှင် အသုံးပြုနှုန်း၊ ပတ်၀န်းကျင် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး 1လ 1ကြိမ် Servicing လုပ်သင့်ပါတယ်
10. Aircon ကိုအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ရော Maintenance လုပ်လို့ရလား
အခြေခံ Maintenance အနေနဲ့ Air filter နဲ့ Body အဖုံးကို တကြိမ်ဆေးကြောပေးလို့ရပါတယ်၊ အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အခန်းတွင်းအေးမြမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်
11. Aircon ဘာကြောင့်အနံ့ထွက်နေရတာလဲ
အနံ့တွေဟာ Fancoil အတွင်းမှာ မှိုနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့် ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်၊ အနံအရမ်းဆိုရင်တော့ Chemical Cleaning လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်
12. Aircon Gas ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပါက ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ
Gas ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပါက Gas ဖြည့်ခြင်းဟာ အဖြေတခုမဟုတ်ပါဘူး၊ Gas တွေဘယ်လောက်ထွက်နေသလဲဆိုတာ High Pressure Testing လုပ်ပြီး အပေါက်ရှာရပါမယ်၊ ထိုအပေါက်ကို ပြုပြင်ပြီးမှ သင့်တော်သော Gas ပမာဏ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်း ပေးရပါမယ်
13. Condensor ကိုရော Servicing လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား
Condensor မှာ ဂျီးများပိတ်နေခြင်းကလည်း အအေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေသလို Compressor သကိတမ်းကိုလည်း တိုစေပါတယ်၊ မီးအားလည်းပိုစားစေပါတယ်
14. Condensor ရဲ့အ၀င်အထွက် ကြေးပိုက်တွေ ဘာလို့ရေခဲနေရတာလဲ
ဖြစ်နိုင်ချေ2ခု ရှိပါတယ်၊ ပိုက်အသေးမှာ ရေခဲနေခြင်းဟာ System အတွင်း Gas လုံလောက်မှု မရှိဘူးဆိုတာ ပြပါတယ်၊ ပိုက်အကြီးမှာ ရေခဲနေခြင်းဟာ Fancoil သို့မဟုတ် Filter မှာ ဂျီးပိတ်နေခြင်း သို့မဟုတ် Blower မလည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
15. Aircon ကသူ့အလိုလို ပိတ်ပြီး မီးလုံးလေးတွေမှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲ
မီးလုံးမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြစ်တာက System ထဲမှာ ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိတာကို ပြပါတယ်၊ ဒါကြောင့် Aircon ကဆက်အလုပ်မလုပ်ဘဲ သူ့အလိုလိုပိတ်သွားပါတယ်၊ သူ့အလိုလိုပိတ်သွားတာဟာ ကာကွယ်ခြင်းသဘောတရားဖြစ်ပြီး Electrical Power Supply ကို Reset လုပ်ပြီး ထပ်မသုံးသင့်ပါဘူး၊ Service Center ကိုဆက်သွယ်ပြုပြင်သင့်ပါတယ်
16. Aircon က သူ့အလိုလို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ
Remote Control မှာ Timer Setting ချိန်ထားမိလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ Fancoil ရဲ့ Printed Circuit Board ပြဿနာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ပြင်လို့ရမယ့် အခြေအနေဆို ပြင်နိုင်ပြီး မရတော့ရင် PCB ကိုလဲဖို့လိုအပ်ပါမယ်
17. Aircon ကို Remote Control ကနေ ဖွင့်လို့မရဘူး
ပြဿနာက Remote Controller or Fancoil Printed Circuit Board မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ Remote Controller ကိုတခြား Fancoil မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ၊ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် PCB မှာ ပြဿနာရှိနေနိုင်ပါတယ်၊ ပြင်လို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးလဲရှိသလို အစားထိုးပစ္စည်းလည်း လဲရနိုင်ပါတယ်
18. Aircon ကမောင်းနေရင်း Breaker ကျတယ် ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘာစစ်ရမလဲ
Aircon Breaker ပြုတ်ကျခြင်းက Wire Shock ဖြစ်ခြင်း၊ Power Socket/Plug ပေါက်ခြင်း၊ Main Breaker ပျက်ခြင်း၊ Lose connection ဖြစ်ခြင်း၊ Compressor မကောင်းခြင်း၊ Compressor Capacitor မကောင်းခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် Power ပိတ်၍ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် Service Center ကိုဆက်သွယ်ပြုပြင်သင့်ပါတယ်
19. Aircon Pressure စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ
Aircon တစ်လုံးဟာ Gas တွေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ခဏခဏပြန်ပြန်ဖြည့်နေရပြီဆိုရင် တစ်နေရာရာမှာ ထွက်ပေါက်ရှိနေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ထွက်ပေါက်ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် High Pressure Testing လုပ်ရပါတယ်၊ Condensor, Fancoil & Pipe Line တွေကို High Pressure ထိုးပြီးလိုက်ရှာရပါတယ်၊ အပေါက်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ရပါမယ်၊ ပြီးမှ သင့်တော်တဲ့ Gas ပမာဏထည့်ရပါမယ်
20. Aircon က ပါဝါမလာတော့ဘူး
Remote နဲ့ဖွင့်လိုမရတာဆိုရင် remote ကောင်းမကောင်းစစ်ပေးပါ ဓာတ်ခဲ့အသစ်လဲကြည်ပါ၊remote ကိုဖုန်း camera ရှေ့မှာထားပြီးနှိပ်ကြည်ပါကောင်းရင်မီးအနီလင်းလာမယ် မကောင်းရင်မီးမလင်းဘာဘူး။Remote ပျက်နေရင် Indoor မှာ auto on/off ခလုတ်ရှိပါတယ်စက်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိပါတယ် on/off ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ကြည်ပေးပါ။
Safe card ကောင်းမကောင်းစစ်ပေးပါ Safe card ထဲမီးမရောက်ရင်လဲပါဝါမလာဘာဘူး ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီး ပလပ်ပေါက်နဲ့တိုက်ရိုက်သုံးကြည်ပါ၊
အကယ်၍ safe card နဲ့ remote ကကောင်းနေရင် စက်ပိုင်းကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ပါဝါမလာတာက indoor က PCB Card မကောင်းတာ swin motor မကောင်းတာ သာမီနယ်ဘုတ် မကောင်းရင်လဲ ပါဝါမလာတက်ဘူးသေချာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊။
21. Aircon ကအသံမြည်တာ
သုံးထားတာကြာမှာ အသံမြည်းလာတယ်ဆိုရင် Indoor ကမြည်းတယ်ဆိုရင် fan bower ကဂျီးပိတ်ပြီးလည်တဲ့အချိန်ရုံရတယ်ဆိုရင် အသံထွက်လာတက်ပါတယ်၊cover ကအန်မကျရင်လဲ အသံမြည်းတယ်တယ်၊outdoor မှာဆိုရင် compressor ကိုပတ်ထားတဲ့ sound cover ကအန်မကျရင်လဲအသံမြည်းတက်ပါတယ်၊အသံမြည်းတယ်ဆိုရင်ဆက်မသုံးသင့်ဘာဘူးစက်ကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
22. Aircon က အနံထွက်နေတယ်
ညှော်နံထွက်တာဆိုရင် စက်အတွင်းပိုင်းက wiser lose ဖြစ်နိူင်တယ်၊တခါတလေစက်ထဲမှာ အကောင်တွေဝင်ပြီးသေသွားရင်လဲ အနံထွက်လာတက်တယ်၊လေဝင်လေထွက်မကောင်းရင်လဲအခန်းအတွင်းကရေခိုးရေငွေ့များရင်လဲအနံမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ် သေချာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။